Dalxus Media Group » Dhageyso Xog Cusub: Cudur Halis ah oo laga helay amiirka Alshabaab, Xaaladiisa oo laga deyrinayo iyo Beelaha isku haya Hogaanka KooxdaDalxus Media Group
Dhageyso Xog Cusub: Cudur Halis ah oo laga helay amiirka Alshabaab, Xaaladiisa oo laga deyrinayo iyo Beelaha isku haya Hogaanka Kooxda
Hoggaamiyaha Shabaab Abu Cubayda ayey kasoo dhamaatay inuu maamulo kooxdaan kadib markii la sheegay inuu caloosha kaga dhacay cudurka Kansarka sida uu qoray wargeyska The Star oo kasoo baxo dalka Kenya.
Sidoo kale warar kale ayaa sheegayo inuu hoggaamiyaha qabo cudur dhanka Kiliyaha isla markaasna ay fadhiisteen labada Killi.
Haddaba waxaa soo if baxayo Khilaaf xooggaan oo ka dhex dhashay kooxdaan kaasoo ku saabsan ciddii buuxin laheyd booska uu ka jiraday Hoggaamiyahooda Abuu Cubeyda.
Golaha Shuurada kooxdaan oo ah meesha laga soo saaro go’aanada iyo cidda hoggaanka qabaneyso ayaa u kala qeybsamay laba qeybood sida uu qoray Wargeyska The Star.
Xubnaha ugu badan ee Golaha Shuurada ayaa kasoo jeedo Beesha Hawiye, waxayna si deg deg ku jiro go’aan ugu qaateen inuu Xasan Fiidow noqdo ninka ugu haboon ee badali karo hoggaamiyahooda dhimashada kusii socdo isla markaasna ay iyaga xilkaas u magacaabeen.
Magacaabistaan ayaa keentay inuu khilaaf xoggaan soo kala dhexgalo xubnaha Shuurada, sidoo kalana wuxuu khilaafkaan saameyn ku yeeshay safafka dagaalyahanada Shabaab.
Dagaalyahanada ugu badan Shabaab ayaa kasoo jeedo Beesha Darood, waxayna hadda dareemayaan inay ku awood yar yihiin golaha Shuurada isla markaasna ay meesha kasii baxeyso awooddii ay ku lahaayeen Golahaas.
Wararka soo baxayo ayaa sheegayo inuu Mahad Karate oo ah madaxa Sirdoonka kooxdaan uu ahaa ninka la doorbidayey inuu xilkaas qabto marka hoggaamiyahooda dhinto.
Waxaa soo baxayo hadda inuu Karate aruursanayo ciidamo badan uuna doonayo inuu si afgambi ah kula wareego hoggaaminta kooxda isla markaasna uu meesha ka saaro cid kasta oo xilkaas loo magacaabo.
Waxa la sugayo ayaa kaliya ah tallaabada uu qaadi doono Karate, waxayna tallaabadaas noqon doontaa mid go’aamiso mustaqbalka kooxdaan Argagixisada ah oo haday ay dagaalaan ay noqon doonto middii ay ku bixi lahaayeen.
Wadamo ku yaalo Qaaradda Africa ayaa doonayo inay Shabaab meesha ka baxdo oo ay baaba’do waxayna dhawr jeer ku qaadeen weeraro lagu dilay hoggaamiyaal, Saraakiil iyo askar ka tirsan Kooxdaan.
Dowladaha Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda oo kamid ah howgalka Midowga Africa ayaa loo xil saaray inay Soomaaliya kusoo celiyaan nabad isla markaasna ay meesha ka saaran Shabaab, waxaase muuqato inay shaqadooda gabeen oo ay ku dhex wataan dano siyaasadeed iyo inaysan ka go’in mushaarka waalida ah oo ay helaan ciidamadooda joogo dalka Soomaaliya.